NJIKO NA-EDUZI ULE NYOCHA N'EFU MAKA UMUAKA NA FCT
Previous IGBAJI: NWUNYE NELSON MANDELA, WINNIE MANDELA NWURU 81
Next NDI UWEOJI NA-AGBAGHA OGWE AKA 120, JIDERE MMADU ISE NDỊ BỤ ỤBỤRỤ NA EDO
AHU IKE BU AKU, Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News
NJIKO NA-EDUZI ULE NYOCHA N’EFU MAKA UMUAKA NA FCT
“The Nigerian Optometric Association (NOA)” kwuru na ya ga-amalite igba ule nyocha zuru oke nke umuaka n’etiti umuaka ise na afo 14. Dr Ngozi Nwanekezie, onyeisi oche nke NOA FCT Chapter, gwara News Agency nke Nigeria (NAN) na Wednesday na Abuja na ebumnuche ahụ bụ iji meziwanye ihu ụmụaka na mba ahụ.
O kwuru na mmemme ahụ bụ nke a ga – eme maka Friday ọ bụla nke ọnwa ahụ, ọ ga – ebido na March 30 ma kwụsị na November.
AHUIKE: ABIA NA-EBUFE KAADI NDI A KWURU UGWO MAKA UMU AMAALA
Nwanekezie kwuru na e chere echiche ahụ “Anya m, ikike m,” na-agbakwụnye na ebumnobi bụ iji hụ na ọhụụ dị elu na ahụike dịka ikike nke nwatakịrị ọ bụla.
Ọ kọwara na mkpakọrịta ahụ kpebiri itinye uche na ụmụaka n’ihi na “mba dị mma na-amalite site na ụmụaka.”
Onye isi oche ahụ kwuru na ụzọ ahụ bụ akụkụ nke ọrụ ndị ahụ na-eme iji cheta afọ 50 ọ ga-enye aka na ahụ ike na mba ahụ.
Ihe abuo bu kwa iji belata ibu umu nke umuaka na enweghi anya na mba.
Dịka ya si kwuo, ụzọ ahụ bụ ịchọta ụmụ nwere nsogbu ịma ọhụụ, iji dozie nsogbu ahụ tupu ha etoo.
AHUIKE NKE DOKITA NKE ONUNA-AGU OTUTU NDI NAIJIRIA ELU
Nwanekezie kwuru na ihe dị ka nde ụmụaka iri na itoolu bụ ndị ọhụụ n’ụwa nile, na-agbakwụnye na ụmụ nde iri na abụọ n’ime ọnụ ọgụgụ ahụ nwere nsogbu ọhụụ n’ihi mmejọ na-ezighị ezi.
Onye isi oche ahụ chịkọtara ọnụ ọgụgụ nke ụmụaka ndị kwụsịrị ịga akwụkwọ na mba ahụ n’ihi na ha enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma n’ihi ihe ịma aka.
O kwuru kpọmkwem na ọ bụrụ na e lere anya ụmụaka ahụ, a ga-emezi ihe ịma aka dị otú ahụ n’oge gara aga.
Nwanekezie depụtara ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ maka nyocha ihuenyo anya na FCT iji tinye Opticare Anya mpaghara 2, Anya R Us Vision Center Garki 2, Ụlọ Ọrụ Vision Vision Wuse 2, Fereprod Medical Center Mpaghara 11 na Maldor Eyecare Center Maitama.
Ndị ọzọ bụ ụlọ ọgwụ HJ, Eye Place Utako, Cypress Eye Center Area 3, De-Lens Ophthalmics Gudu, Smiley Optical Services Wuse, Rayfields Eye Centre Durumi, Ọhụụ anya nke ọma Jikwoyi, Hassan Hospital Maitama, Nnọọ anya na Ụlọ ahịa mberede ọzọ. Ọhụụ kachasị elu Wuse 2.
Dịka ya si kwuo, pasent 80 nke ihe nwatakịrị na-amụta bụ ihe anya, ya mere nwatakịrị na-aga ụlọ akwụkwọ na enweghi ọhụụ, nwatakịrị a agaghị enwe ihe ịga nke ọma n’ụlọ akwụkwọ.
“Ya mere, anyị kpebisiri ike ịgbapụta ma ọ bụ bulie ùgwù onwe onye nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụ nwere nsogbu ịma aka,” ka o kwuru.
Dịka ya si kwuo, nchọpụta mbụ nke nsogbu anya ọ bụla ga-aga ogologo oge iji kwurịta ihe ịma aka dị otú ahụ ma n’ime ụmụaka na ndị okenye.
“Ihe dị ka nde mmadụ nde mmadụ atọ nwere ihe ikpuchi ihu, na-achọ ịnweta ọrụ nlezigharị ọhụụ, iji mee ka arụ ọrụ rụọ ọrụ ma belata nkwarụ.
NA NAIJIRIA, COL NA-AHAZI IHE OMUME MAKA USORO GREEN TEACHER
“Ihe karịrị pasent 80 nke enweghị ntụpọ anya, gụnyere ikpu ìsì, na-egbochi ma bụrụ ndị a pụrụ iji ya rụọ ọrụ dị mfe ma dị irè.
“Dịka ọmụmaatụ, inye ihe nkiri dị mfe iji dozie njehie nke ntụgharị; Ogwugwu ogwu na-eme ka anya di nma, na otutu ihe dika ntabi anya, “ka o kwuru.
N’otu aka ahụ, Dr. Adesuwa Ogli, Kọmitii Na-ahụ Maka Ọgbakọ nke “My View, My Vision Project” ‘kwuru, sị, mmemme a ga-eme maka Friday ọ bụla nke ọnwa ọ bụla site na ụtụtụ elekere iri na ụtụtụ ruo elekere anọ.
Ogli kwuru na ebumnuche nke usoro ihe omume ahụ gụnyere ịnweta isi data nke nhụjuanya anya na Nigeria na ime ka a mara na ọ dị mkpa maka ngwa ngwa iji mee ihe na-akpata nhụjuanya anya.
O kwuru na ọ bụ ụzọ isi gbasaa maka mwepụta nke ahụ ike ụmụ anya na usoro na mmemme nke ministri nke ahụike na agụmakwụkwọ.
EKWEREMADU NA NSOGBU NA FEDERAL GỌỌMENTỊ MAKA IHE ONWUNWE
Ogli kọwara na ụzọ ahụ ga-enye aka n’inweta Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) “Universal Eye Health Initiative” ‘.
Dịka ya si kwuo, ọ bụ atụmatụ mmemme zuru ụwa ọnụ maka afọ 2014 ruo 2019 iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị ahụ anya ghara ịhụ na pasent 25 site na 2019.
O choputara iri isii ulo oru nle anya anya na mba di iche iche dika ulo oru ndi mmadu na-aru oru n’oru ndi isi oru nke ndi isi obodo.
O kwuru na ọnụọgụgụ abụọ n’ime ọnụ ọgụgụ ahụ dị na FCT.
Igbo ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDONEWS ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV NIGERIA NIGERIAN
NDI IGBO AGAGHI EKWE KA BUHARI NA APC GHỌRIA HA MAKA ỌKWA ONYEISIALA NKE AFỌ 2023 – ATIKU
Ọ BỤGHI NSOGBỤ ỌCHICHI ETITI MA Ọ BỤRỤ NA NAIJIRIA ENWEGHI ỌKỤ – FASHOLA
OBINNA VICTOR NSOFOR BỤZI NWAAFỌ MBA ITALY